နီပေါ - ထိုတောက်ပနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအာရှနိုင်ငံများတွင်တဦး။ ကိုယ်ကသာနီပေါ၏ဘဝအသက်တာနှင့်အတူအနီးကပ်အသိအကျွမ်းမှာပါမြင်စေနိုင်သောထူးခွားသညျ့နှင့်ထူးခြားသော features တွေတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့တွင်အလမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာ ခတ္တမန္ဒူ နှင့်အခြားမြို့ကြီးများ, ဝီလီ-nilly လက်ဆောင်များနှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများဝယ်ယူစဉ်းစားပါ။ ဤသည်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုများပြားကုန်သည်, စျေးဆိုင်, စျေးကွက်နှင့်စျေးဆိုင်ကလွှမ်းမိုးနေသည်။
နီပေါမှာတော့အလွန်ဖွံ့ဖြိုးလက်မှုပညာနှင့်လက်မှုပညာအမျိုးမျိုးတို့ကို။ ဒီနေရာတွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနီပေါ မှလွဲ. သငျသညျကိုမတှေ့တံ့သောဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ, ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ Handcrafted အမြဲတန်ဖိုးထားသောကြောင့်မယ့်အလုပ်ကြိုးစားမှုများနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၌အလှူငွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အဘယျအနီပေါကနေယူဆောင်နိုင်ပါတယ်:
လက်ဖက်ရည်။ သူသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်မတိုင်မီကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဆိုနှင့်မတူဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအရသာနှင့်အနံ့များ၏တောက်ပအရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။ နီပေါလက်ဖက်ရည်က၎င်း၏အရသာနားလည်ရန်, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ညဦးယံ၌စပျစ်ရည်သောက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, သင်ကနည်းနည်းအနားယူနှင့်အဖိုးတန်သောက်ပျော်မွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါစျေးဆိုင်ပိုင်ရှင်မှာမဆိုစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်အပြင်ဘက်၌ရှိသကဲ့သို့: သင်နေရာတိုင်းနီပေါအတွက်လက်ဖက်ရည်မဝယ်နိုင်သောစကားမစပ်, ကစျေးကြီးတဲ့အပျော်အပါးဖြစ်ပြီး, အရေးအကြီးဆုံးကတော့။ တစ်ပန်း-fruity အနံ့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရသာစမ်းကြည့်ပါ!
ရေနွေးအိုး။ နှင့်လက်ဖက်ရည်ဖြစ်စေ, လက်ဖက်ရည်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမေ့လျော့ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုရိုးရှင်းစွာကြီးမားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလက်ဖက်ရည်လက်ဖြင့် လုပ်. ကျောက်, သံ, ကြွေဝိုင်းရံထားသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင်အခြောက်အရွက်၏ထုတ်ဖော်ရှိသမျှတို့သည်မှော်တွေ့မြင်နိုင်သည့်မြို့ရိုးမှတဆင့်, ဖန်ရေနွေးအိုးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဤသည်နီပေါကနေအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအမှတ်တရပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
Pashmina ။ လုံးဝကျွမ်းတဝင်မရှိသောများစွာသောခရီးသွားဧည့်များအတွက်စကားလုံးနှင့်အကြောင်း, ဒဏ်ငွေပျော့နှင့်နွေးထွေးသောထည်ရဲ့, ငါတို့ cashmere ၏နာမကိုရှိသည်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးသောဟိမဝန္တာ cashmere ဆိတ်သငယ်ကို fluff ကနေထုတ်ယူသည်။ အဆိုပါ pashmina သိုးမွှေးအခြားသောအမျိုးအစားများကို add ကြပါဘူး။ ဒါကပဝါ, shawls, Cape, လက်အိတ်သို့မဟုတ် SOCKS အဖြစ်နီပေါကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်တစ်ဦးကို 100% မှာသဘာဝလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အလှဆင်။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်အများစုမှာနီပေါနိုင်ငံမှလက်ဆောင်အဖြစ်ရောက်စေဖို့ဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါ, ရွှေငွေ၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ရွေးချယ်မှုကိုရပ်တန့်။ အတော်များများပင်အထူးသညျသူတို့အဘို့ထိုအရပ်၌ သွား. , အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများအာမခံနေကြသည်။ သငျသညျအကွင်း၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ခြင်း, လက်ကောက်, ကဲ့သို့၎င်း, ရိုးရှင်းသောဖန်နှင့်အတူအဖိုးတန်ကျောက်များနှင့်အတူထိုမှပါးရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအထူးတစ်ခုခုချင်လျှင်, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလို့ငှာစေနိုင်သည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ပင်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ထူးခြားတဲ့အလှဆင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
အားလုံးအတွင်းပိုင်း။ နီပေါစျေးကွက်နှင့်သင်အိမ်, တိုက်ခန်းသို့မဟုတ် villa ၏အတွင်းပိုင်းကွဲပြားဖို့ခွင့်ပြုသောစတိုးဆိုင်များဝယ်နိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအများကြီး:
တစ်ဦးတင့်ကားဒါမှမဟုတ်သူတို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်, paubha ၏ရုပ်ပုံလွှာ - တစ်ရိုးရာဓလေ့အနုပညာ, ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ပိုးထားနှင့်သဘာဝဆိုးဆေးများနှင့်အတူခြယ်သ;
; သူတို့နီပေါကနေမှသာဆောင်ကြဉ်းနိုင် - တံခါးကိုကြာပန်းများ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, ဒါမှမဟုတ်ဆန့်သောလက်ကိုပုံစံကိုင်တွယ်
Bowl သီဆို - ထိုယောဂ၏ပန်ကာများနှင့်သာအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အသံလက်အောက်တွင်ဿုံအနားယူနှင့်ဆငျခွငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါသံကိုအံ့သြဖွယ်ရှိ၏
အဆောင်လက်ဖွဲ့နေကြတယ်, အဆောင်လက်ဖွဲ့ Rune "ဘေးဥပဒ်ကိုမျက်စိ" ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါလိမ့်မယ်သာသင့်အိမ်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန်, သင်သည်သူတို့၏အစွမ်းသတ္တိကိုယုံကြည်လျှင်။
အခုဆိုရင်သင်ကသာနီပေါ၏ဟိမဝန္တာကျော်ကြားကြောင်းကိုငါသိ၏။ တစ်ဦးကခတ္တမန္ဒူအပေါင်းတို့နှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စျေးဝယ်, ပျော်ရွှင်ဖွယ်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို၏မြို့တော်ဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ရုံခရီးသွား၏အဓိကစည်းမျဉ်းမမေ့မလြော့ပါ - bargain နှင့် bargain တဖန်။
ကိုရီးယား - ဘေးကင်းလုံခြုံရေး
လာအိုနိုင်ငံ Tours မှ
နီပေါ - ဆွဲဆောင်မှုများ
Buckwheat - ရိုးရှင်းသောဟင်းလျာများပြင်ဆင်နေ၏အသစ်နှင့်မူရင်းနည်းလမ်းများ
လူမျိုးရေးအယ်လ် Pacino ကိုအလွန်စိတ်ပျက်ပရိတ်သတ်တွေ
စားနပ်ရိက္ခာ Daily သတင်းစာ
Reflux gastritis - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
အနီရောင် Currant ၏ Compote
ဂျေရုဆလင် artichoke စုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါ?
မိခင်ဘိန်းဖြူ - မည်မျှကလေးများ?